Iintsomi ezi-5 zeendaba zosasazo | Martech Zone
Iintsomi ezi-5 zeMidiya yokuNxibelelana
NgoMvulo, Novemba 2, 2009 NgoMvulo, Februwari 8, 2016 Douglas Karr
Oku kunokuba yinto ephindwayo… kodwa ndifuna ukukugxininisa oku. Ndibukele iinkampani ezininzi zikhubeka kuzo zonke iindlela zonxibelelwano. Ekugqibeleni bayishiya ngokupheleleyo. Umbuzo andikwazi ukuwuphendula kukuba kutheni bezame kwasekuqaleni?
Ndiyathanda ukucinga ngemidiya yoluntu njengesikhulisi… an ngokucacileyo i-amplifier enamandla. Ukuba unesiseko esomeleleyo sobudlelwane boluntu kunye nentengiso, kwaye ukugubungela ukufunyanwa kunye nokugcinwa ngokufanelekileyo, umsebenzi wakho omkhulu uya kubonakala njengoko uqala ukubandakanya nokwakha igama kwi-intanethi. Ukuba unesicwangciso se-PR kunye nesicwangciso sentengiso, imithombo yeendaba zentlalo inokuyonakalisa.
Iintsomi zam ezi-5 zeNtengiso yezeNtlalontle
Imithombo yeendaba yoluntu ithatha indawo yewebhusayithi. Usadinga indawo yokufaka isikhokelo kunye nokutsalela ingqalelo kwiimveliso okanye iinkonzo zenkampani yakho.
Imidiya yoluntu ithatha indawo yentengiso ye-imeyile. Imeyile yi push indlela eyazisa abathengi kunye nethemba xa ufuna ukuba kuqhagamshelwane nabo. Ngapha koko, iMithombo yeendaba yeNtlalontle ifuna unxibelelwano lwe-imeyile ngakumbi ukugcina abasebenzisi beendawo zentlalo bebuya. Cinga ngayo yonke i-imeyile oyifumana kwi-LinkedIn, kwi-Facebook nakwi-Twitter!
Ukusetyenziswa okuphezulu kweendaba zosasazo kuthetha ukuba yindawo entle yokwazisa. Imidiya yokuncokola ayisiyonto yokuphosa iintengiso ngaphezu kwe, yinto ekufuneka ixelwe ngaphakathi. Iinkampani ezininzi kakhulu zigalela imali kwizibhengezo zentengiso kunye nentengiso yokubhaliweyo kwiindawo zosasazo zasekuhlaleni apho abasebenzisi bengenanjongo yokuthenga.
Impembelelo yemidiya yoluntu ayinakulinganiswa. Impembelelo yemidiya yoluntu unako ukulinganiswa, kunzima ngakumbi ukulinganisa ifuthe. Uya kudinga ukuqesha Ezinamandla kubahlalutyi package- mhlawumbi ngokudityaniswa kwemithombo yeendaba kwezentlalo, okanye ufumane indlela yokusebenzisa ikhowudi ngokukuko ngoku kubahlalutyi iphakheji yokubamba izikhokelo kunye nokuguqulwa kwimithombo yeendaba.
Imidiya yokuncokola ilula, wena nje yenze. HAYI! Imidiya yokuncokola ayikho lula. Khawufane ucinge xa ​​ukwitheko lesidlo sasemini kwaye uthetha malunga neemveliso kunye neenkonzo zakho unethemba. Uyancuma, uyancuma, ubuza umbuzo, uthi zonke iimpendulo ezichanekileyo… uhlawula isidlo sasemini… uyambamba. Kwi-Intanethi, awusoze uzibone zisiza, awusoze wazi ukuba bebeye phi, awazi kwanto ngaphandle kwento yokuba banolwazi ngakumbi kunawe.
Imidiya yokuncokola ikwakha ukuthembana nomntu ekusenokwenzeka ukuba zange wakhe wadibana naye. Kunzima, kuthatha ixesha… yimarathon, ayisiyiyo i-sprint. Imithombo yeendaba kwezentlalo iyasilela kwiinkampani ezininzi kuba zibajongela phantsi oovimba kunye nexesha elithathwayo ukwakha amandla. Abaqondi ukuba lutyalomali lwexesha elide, hayi isicwangciso sexesha elifutshane.
Ngesicwangciso, unokuqhuma ngaphandle kwesango kwaye ukhulise ishishini lakho ngaphaya kokulindelweyo. Ngaphandle kwayo, unokuphosa itawuli.
Esi sizathu sokuba i-Southwest Airlines kunye neZappos ziphumelele ngezeNtlalontle, kodwa i-United Airlines kunye ne-DSW azenzi njalo. I-Southwest Airlines kunye neZappos zazintle kakhulu, ziinkampani ezijolise kubathengi phambi kokuba imidiya yoluntu yavela kweli nqanaba. I-United Airlines ayinakuze ikwazi ukusebenzisa isicwangciso-qhinga semidiya yoluntu esinikezwe ngokusemthethweni nangobunkokeli.
Njengepaneli namhlanje kwi-Real Estate BarCamp Indianapolis, ungabona uluhlu lweearhente kunye nabarhwebi kanye kwigumbi. Abanye, njengomhlobo olungileyo kunye nomxhasi uPaul Henry (bobabini Ingqukuva kwaye DK New Media bamncede), bayaprinta ukuza kuthi ga ngoku kangangokuba bayirhoxisile yonke imithombo yeendaba zesiko kwaye bakwi-intanethi ngokupheleleyo. Ingxaki kaPaula ayisiyiyo Ungazifumana njani izikhokelo… Yindlela yokugcina isicwangciso-qhinga semidiya yoluntu ngesantya ekukuyo ngelixa usebenza zonke izikhokelo zakhe.
Abanye egumbini bebesasebenza ngasemva kwegophe ... akukho twitter, akukho facebook, akukho mntu kwi-Intanethi, akukho ncedo kwiinjini yokukhangela, akukho kubhloga, njl.Akukude kakhulu ukuba aba bantu benze isicwangciso esisebenzayo sokuthengisa kwi-Intanethi… kodwa kunjalo kwangethuba ukubenza bangene kwisicwangciso seMidiya yoLuntu kwimbono yam ethobekileyo.
Abafikayo kufuneka bafunde ukuhamba phambi kokuba bakhwele. Bafuna iwebhusayithi esebenzayo enokutsala ukugcwala kwabantu kwaye ibonelele ngolwazi lokunxibelelana ukuze babandakanyeke kumthengisi. Kufuneka baphande kwaye basebenzise amagama aphambili anefuthe kwingingqi abasebenza kuyo-kubandakanya abamelwane, iikhowudi ze-zip, iidolophu, izithili, izithili zesikolonjl. Bafuna ukuqesha incwadana ye-imeyile ukuze bahlale benxibelelana nezikhokelo kunye nabathengi bangaphambili. Kufuneka bathumele Isisombululo sezindlu ezithengiswayo ukubuyisela iiflaya abagcina zigxumeka phambi kweepropathi.
Imithombo yeendaba kwezentlalo inokubonelela ngevolumu engakholelekiyo yezikhokelo kwintengiso yakho… kodwa kufuneka ube nefaneli yentengiso endaweni, ukulinganisa iimpembelelo zeziphumo, kwaye usebenze rhoqo kwinkqubo yakho yentengiso ukondla nokubamba izikhokelo kunye nabathengi. Imithombo yeendaba ezentlalo iyeza ngokulandelayo… yandisa inkqubo yentengiso esebenzayo kwaye iqala ukukhukhumala njengoko igunya kunye nokungafihli kukhula.
tags: email Marketingi intsomiImidiya yokuncokolaSocial Media Marketingiintsomi zosasazo kwezentlalo
IWebhusayithi yakho eBloot ayikufanelekelanga ukukhokela
Nov 3, 2009 kwi-10: 03 AM
Molo Doug, iposti enkulu.
Abantu abaninzi bafuna ukutshabalalisa "iMidiya yokuncokola yiCakewalk" intsomi. Ndim ndedwa umntu owamkela kwangoko e-ofisini, kwaye namaxesha abaphathi bacele ukuba "ndibafundise ukusebenzisa i-Twitter ngokuchanekileyo" ngeyure okanye ezimbini kuye kwandothusa. Ezi zinto zithatha ixesha, ukuzibophelela- kunye nomnqweno wokufunda. Abantu bafuna ukulungiswa ngokukhawuleza kwi-SM, kuba bacinga ukuba yindlela ekhawulezayo yokwenza imali. Akunjalo ngokwenene, kwaye kufuneka ufunde ngokwenza.
Nov 4, 2009 kwi-4: 04 AM
Utsho kakuhle, Andrew! Xa abantu besithi "ndifundise ukuyisebenzisa ngokuchanekileyo", ngamanye amaxesha bathetha ukuba… "singabusebenzisa njani obu bugcisa ngendlela elungileyo". Ndibalekile… ndikhala! 🙂
Novemba 3, 2009 ngo-1: 27 PM
Inqaku elihle, enkosi kakhulu. Eofisini yam kukho ukubhideka okuninzi malunga nemiba ethile yemidiya yoluntu, ndiza kuyithumela nge-imeyile kule ofisi!
Nov 4, 2009 kwi-4: 03 AM
Enkosi Joe! Ukuba iofisi yakho ifuna ukumba nzulu kancinci, yile nto DK New Media yenza! Ndazise ukuba singanceda.
Novemba 3, 2009 ngo-4: 53 PM
@douglaskarr Ukuqonda kwakho kuyahlaziya, ngakumbi ukwahlula kwakho ukuba ayinguye wonke umntu okulungeleyo ukuthatha inxaxheba kwi-SM. Ngokuqinisekileyo, abo babona iinethiwekhi ze-SM njengenye indawo yokuhambisa imiyalezo yentengiso bayangqina ukungabinakho ukuqonda kokuqonda ukuba ezo nethiwekhi zimeleni, besenza impazamo ngesixhobo seshishini okanye isicwangciso sentengiso.
Nov 4, 2009 kwi-4: 02 AM
Enkosi kakhulu Scubagirl15! Konke kuqala ngesicwangciso… itekhnoloji kufuneka isetyenziswe EMVA kokuba zonke iinjongo zichaziwe. Uninzi lwabantu beendaba zentlalo bathanda ukuzama ukuthatha imithombo yeendaba zentlalo kwaye bayenze ilingane zonke iingxaki inkampani enazo. Yixabise intetho yakho yobubele!
Nov 4, 2009 kwi-3: 46 AM
Ndidinga ukubuyela emva kumdlalo wentengiso yentlalo. Izinto zitshintsha kakhulu suku ngalunye. Zonke iindlela endikade ndizisebenzisa azibonakali zisebenza ngoku. Kodwa uye wafumanisa izinto ezimbalwa endingazange ndazicinga ngaphambili, kwaye ndiyayixabisa loo nto! Kuya kufuneka ndibuyise isinqe sam kwigiya kwaye ndisebenzise ithuba lokuthengisa ngokukhawuleza!
Nov 4, 2009 kwi-4: 07 AM
Sukuba nexhala kakhulu malunga nokuphulukana nokubambeka. Sisekwiintsuku zasentshona zasentshona zentengiso yentlalo kwaye kuninzi esinokukufunda. Fumana iinjongo kuqala, yakha isicwangciso-qhinga… kwaye ukuba intengiso yemidiya yoluntu inokudlala indima kwaye ube ne-ROI efanelekileyo enikwe izixhobo… emva koko yenze oko!
Novemba 4, 2009 ngo-1: 15 PM
Njengesiqhelo… ingcebiso enkulu, ukuqonda ngesimo sengqondo esihle! Enkosi Doug!